Buyini ukumaketha kobudlelwano namasu wokukusebenzisa | Izindaba ze-ECommerce
Kuyini ukumaketha okuhlobene
Wake wezwa ngobudlelwano bokumaketha? Njengoba wazi, amasu wokumaketha nge-Intanethi ahlala eshintsha futhi lokho kuvame ukusho ukuthi kufanele wazi okuzayo nokuguqukayo. Kulokhu, i- ukuthengisa okuhlobene Kuyinto yokuziphendukela kwendabuko, kepha noma kunjalo ababaningi abayiqondayo, ingasaphathwa eyokuthi bayisebenzise.
Ngakho-ke, ngalesi sikhathi sifuna ukukusiza uqonde umqondo wayo, yini oyihlukanisa neyendabuko, yenzelwe ini nokuthi izuzisa ngani. Ngaphezu kwalokho, uzofunda ukuyisebenzisa ebhizinisini lakho. Singafika emsebenzini?
1 Kuyini ukumaketha okuhlobene
1.1 Umehluko phakathi kokukhangisa kobudlelwano nokumaketha kwendabuko
2 Yimiphi imigomo onayo
3 Izinzuzo zokusebenzisa ukumaketha kobudlelwano
4 Ungayisebenzisa kanjani ebhizinisini lakho
Ukumaketha kobudlelwano kuyaziwa nangokuthi ukumaketha kobudlelwano. Ifaka phakathi uchungechunge lwamasu nezindlela imiphumela yazo etholwa esikhathini eside esizayo. I- Inhloso yalokhu makethe ukwakha ukwethembeka kwamakhasimende, ngaleyo ndlela kusiza ukukhulisa ukuthengwa kwamakhasimende futhi kungazuzisi inkampani kuphela, kodwa nekhasimende uqobo. Ngalokhu, ukwethemba kanye nenani elengeziwe kuyizinsika ezimbili ezibaluleke kakhulu.
Kulokhu, ukumaketha kobudlelwano kusekelwe ngaphezu kwakho konke kumakhasimende, hhayi kumkhiqizo, yingakho amasu enziwayo egxile ekunikezeni ukunakekelwa komuntu uqobo kumakhasimende. Futhi akususelwa ekukholiseni ukuthi uthengise imikhiqizo, kepha kukusiza ngendlela ethemba ukuthi noma yikuphi ukuthenga okwenzayo esitolo kuzofika nekhwalithi.
Umehluko phakathi kokukhangisa kobudlelwano nokumaketha kwendabuko
Ukumaketha kobudlelwano kungaqondakala njengokuvela kokumaketha kwendabuko, kepha yini ehlukanisa lokhu okubili? Kulokhu, akuselona iqiniso lokuthi ukumaketha kobudlelwano kugxila kumakhasimende nasekukhangiseni kwendabuko kumkhiqizo, kepha kuyaqhubeka:
Ukuxhumana. Ngenkathi owendabuko efuna ukufinyelela izithameli ezibanzi ngokwakha umlayezo ongafinyelela kwinani elikhulu, esimweni sobudlelwano bususelwa ezingxoxweni zomuntu ngamunye nezomuntu siqu, ezinikeza amaklayenti kuqala.
Amasu. Ngokungafani nokumaketha kwendabuko, okwenza amasu wesikhashana, ukumaketha kwezobudlelwano kuhlala isikhathi eside, ngoba lokho okuzama ukukwakha ukwethembeka kwamakhasimende.
Inhloso yokugcina. Sike saphawula phambilini ukuthi inhloso yokumaketha ubudlelwano igxile kwikhasimende. Kepha ngalokhu akadingi leyo nhloso ukuthi izuzwe esikhathini esifushane, kepha esikhathini eside, futhi akafuni ukuthengisa, kepha ukuqinisa ubudlelwano.
Yimiphi imigomo onayo
Ngokuvamile, i izinhloso zokumaketha kobudlelwano Yilezi:
Sebenza ubudlelwano neklayenti. Lokhu kusho ukuthi wazi iklayenti, izidingo zalo nokuthi yini ongayenzela yona.
Sungula uchungechunge lwamasu ngokuya ngamakhasimende, hhayi kakhulu kumkhiqizo.
Izinzuzo zokusebenzisa ukumaketha kobudlelwano
Ukumaketha kobudlelwano kuyachuma. Manje amabhizinisi awasagxili kakhulu ekutholeni ukuthengisa ngokushesha, kepha kumakhasimende abaziyo bahlala nabo futhi ngaleyo ndlela bafeze insizakalo engcono kubo. Kufana nezinkampani zocingo. Yize izilinganiso abanazo zifana nawo wonke umuntu, abakufunayo ukuzama ukwanelisa iklayenti futhi, kulokhu, banikela ngamabhonasi noma okunikezwayo okungabasiza ukuthi bahlale isikhathi eside ngangokunokwenzeka. Uma kwenzeka ezitolo eziku-inthanethi kuyafana. Futhi ngukuthi ngalezi zinzuzo eziningi ziyatholakala, njenge:
Ukwanda kwe-LTV. I-LTV yisifinyezo lapho inani le-Lifetime laziwa khona, noma yini efanayo, inani kumugqa wesikhathi. Kusho ukugcina amaklayenti isikhathi eside ngangokunokwenzeka, ukuzama ukufaka inani nokwenza iklayenti lizizwe njengomuntu, hhayi njengenombolo yesivumelwano.
Benze babe ngamanxusa. Uma unewebhusayithi lapho bakuphatha kahle khona, lapho bekuthengisa khona ngokuya ngezidingo zakho (hhayi lokho abafuna ukukuthengisa), futhi nokuthi uzizwa ukuthi bayakukhathalela, awucabangi ukuthi uzoncoma lelo sayithi komunye umndeni noma abangane? Ngamanye amagama, uzothola amakhasimende athembekile azokuncoma nakwabanye.
Unciphisa izindleko. Kukholwe noma ungakukholwa, ukusebenzisa imali kwezentengiso nokukhangisa ukufinyelela kwamanye amakhasimende kuncishisiwe. Ekuqaleni ungahle ungayi, kepha njengoba unamakhasimende athembekile ngeke usadinga ukukhokha ukukhangisa noma ukwaziwa, amakhasimende akho asezokwazi ngawe.
Ikhasimende elijabulayo, ukuthenga okujabulisayo. Zicabange ungena esitolo. Uqala ukubuka izinto kuthi kungazelelwe umsizi wesitolo afike kuwe abuze ukuthi ufunani. Impela uzophendula ukuthi ubhekile, kepha kuthiwani uma lowo muntu enganyakazi futhi ekulandela njalo? Ekugcineni, uzogcina usushiya esitolo ngoba awuzizwa kahle. Yebo, lokhu emhlabeni we-inthanethi kwenzeka lapho bekugcwalisa ngemikhiqizo ehlobene nalabo obabonile, noma bezama ukukunikeza okuthengwayo. Manje, uma esikhundleni sokwenza lokho, ugxila kumasu akuxhuma nekhasimende, awucabangi ukuthi bazokweneliseka ngokwengeziwe ukuba esitolo nokubona imikhiqizo ngaphandle kwalowo muzwa wokuthi yilokho ofuna bakuthenge?
Ungayisebenzisa kanjani ebhizinisini lakho
Ekumaketheni kwendabuko, sekuqalisiwe ukusetshenziswa amasu ngemuva kokuthengisa, njenge-imeyili ngemuva kokuthengisa ukwazi ukuthi ukuthandile yini okuthengile, uma wenelisekile ngomkhiqizo, njll.
Kepha, esimweni se ukumaketha kobudlelwano, kuyaqhubeka. Amanye amasu angaba:
Ukuthumela ama-imeyili ngemuva kokudayiswa uma kungenzeka uthenge okuthile kodwa futhi nosuku lokuzalwa oluhle noma usuku olujabulisayo njengekhasimende.
Ukuthumela amavidiyo ahlobene nomkhiqizo owuthengile ukuze wazi yonke imisebenzi engaba nayo.
Amazwana kumanethiwekhi omphakathi. Izinkampani zihlala zilindele ukuthi amakhasimende aphawule ngokuthunyelwe kwawo; kepha lapha bekungeke kube njalo, kepha ngokuphambene nalokho. Thumela imibono kumanethiwekhi omphakathi ukuze wakhe ubudlelwano nabo.
Thumela imininingwane. Isimanga, into ekwenza uzizwe uthandwa yinkampani.
Imiklomelo. Njengoba izaphulelo noma ukukhushulwa okukhethekile ukukwenza uzizwe uhlukile.
Manje yisikhathi sakho sokucabanga ngecebo lokumaketha ebudlelwaneni bebhizinisi lakho. Ekuqaleni kungakubiza, kepha okuhle ukuthi ungakuguqula ngokusekelwe kulokho okufundayo ukuthola okuhle okukufanele esitolo sakho se-inthanethi (noma kuwebhusayithi yakho jikelele).
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba ze-ECommerce » Marketing » Ukuthengisa oku-intanethi » Kuyini ukumaketha okuhlobene
Abahlinzeki abaphezulu be-10 abadonsa phansi eSpain
Incwajana yobunikazi bebhizinisi: iyini nokuthi ungayakha kanjani